DINIKY NY SAMY MALAGASY : Mila apetraka mazava ny lalàna mifehy ny fifidianana
Miteraka resabe hatreto ny mbola tsy fahitana soritra mazava ilay lalàna mifehy ny fifidianana izay efa nanaovana fakan-kevitra tamin’ny andiany maro teny anivon’ny kaomitim-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny Céni. 9 novembre 2017
Maro araka izany ireo naneho hevitra ny amin’ny mety hisian’ny korontana raha toa ka tandrevaka sy tsy araka ny tokony ho izy ny voarafitra ao anatin’ity farany. Afak’omaly dia nanatanteraka dinika ireo mpanao politika, antoko politika niaraka tamin’ny fiarahamonim- pirenena noentina indrindra nanasiana tsindrim-peo mahakasika io lalàm- pifidianana io, noentina nandinihana ihany koa ireo fomba hiatrehana ny fifidianana.
Fikaonan-doha tafiditra ao anatin’ilay antsoina hoe diniky ny samy Malagasy. Nivoitra tamin’izany fa tokony hapetraka mazava ny lalàna mifehy ny fifidianana eto Madagasikara mba hahafahana miantoka ny filaminana maharitra eto amin’ny firenena. Fantatra mantsy fa nahitana lesoka ny tsy fahatomombanana teo amin’ny fikarakarana ny fifidianana nifanesy teto amin’ny firenena hatramin’izay ka anisany nahatonga ny fiverim- berenan’ny krizy teto amintsika.
Manoloana izany indrindra, mba tsy hiverenan’ny olana efa nitranga tany aloha intsony no nisian’ilay diniky ny samy Malagasy. Hentitra ireo mpandray anjara tamin’ity fikaonan-doha ity raha nilaza fa tsy misy afatsy ny fanajana ny lalàna ihany no afaka hahatanteraka ny filaminana eo amin’ny sehatry ny politika eto Madagasikara.
“Mba hisian’izany fifidianana hoeken’ny rehetra izany dia tsy maintsy hajaina ny lalàna velona dia io lalàmpanorenana io izany. Izay lalàmpanorenana izay dia milaza mazava izay fotoam- piasan’ny filoham-pirenena ao anatin’ny dimy taona. Mazava tsara ao anatin’io lalàmpanorenana io ilay hoe, tsy maintsy vita ao anatin’ny 25 desambra 2018 ny fifidianana filoham-pirenena manaraka eo”, hoy ny fanazavana noentin’ny mpandrindra ny hetsika, Diniky ny samy Malagasy, Ratefinanahary Emile. Ankoatra ireo mpanao politika sy antoko politika ary ny fiarahamonim-pirenena izay mangataka ny hametrahana mazava ity lalàm-pifidianana ity dia anisany nametraka ny ahiahiany ihany koa ny Cram. Iry voalohany dia tsy hanaiky hatramin’ny farany amin’ny mety hisian’ny kajikajy mety hanemorana ny datim-pifidianana.
2020-09-28 17:27:20 par RoyalCBD
pFpn6L Really informative article post. Much obliged.